Ihe mgbochi mmiri: Ihe nchịkọta ọdịnaya? 4 Ụdị Ntanetị Weebụ nke A Na-efesa na Net
Nchịkọta ọdịnaya bụ mbiputegharị nke ọdịnaya weebụ yana aka ma ọ bụ site na ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ. Imirikiti webmasters na ndị na-ede blọgụ na-echebe ọdịnaya ha n'okpuru iwu nwebisiinka, na iziputa ozi zuru oke dị ka ihe mbụ bụ ajọ mpụ!
N'ụzọ dị mwute, a na-ejikarị ọdịnaya weebụ kpuchie maka ihe ndị a na-enyo enyo na ndị iwu na-akwadoghị dịka nledo ala ụlọ ọrụ, ikuku, na ịzụta data. Otú ọ dị, ihe ziri ezi na ezigbo ebumnuche nke nchịkọta ọdịnaya bụ ntinye data, njikwa ọdịnaya, migration data, ọgụgụ isi, njikwa aha ma ọ bụ nchịkọta azụmahịa.
Ụdị ọdịnaya dị iche iche dị iche anọ dị na ntanetị:
Ụfọdụ webmasters na ndị na-ede blọgụ na-eji ọdịnaya sitere na weebụsaịtị na blọọgụ, na-atụle na ịba ụba nke ibe na saịtị ha dị mma maka ọchụchọ engine rankings. Na nke bu eziokwu, ihe obula nwere ike igbata, ma ihe di iche iche bu ihe ndi ozo bu nke a.
1 - купить роутер вай фай. Ndị na-ede akwụkwọ na akwụkwọ ntuziaka:
Ndị mmemme na ndị na-emepụta ihe na-emekarị ka ndị na-ede akwụkwọ na ndị na-emepe ihe ntanetị na-elekwasị anya na ntanetị ndị a maka ibe ha. Kwuo. com bụ ihe atụ. Ndị ọrụ ịntanetị a na-ahụ maka ịntanetị na ndekọ ntanetị nwere nnukwu ihe ịga nke ọma na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Enwere otutu ọdịnaya na saịtị a, na spammers na-achọkarị ụzọ iji kpochapụ ọtụtụ n'ime ibe ya.N'otu aka ahụ, Manta bụ ebe a ma ama ebe ihe karịrị nde 20 ji edeba aha ha maka ebumnuche ahịa. O bu ihe nwute, otutu ihe di n'ime ya ka achoputara, a na-ejikwa otutu bomo eji eme ihe a.
2. Ezigbo ala:
Afọ ole na ole gara aga, ụlọ ọrụ ụlọ akụ ahụ na-awakpo ụlọ ọrụ ahụ, ihe nrịtaghachi na-efu ha karịrị nde 10.
Ọ dị ka ọdịnaya nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na njem niile na-eme njem. Ụlọ ọrụ ndị a ọ bụghị nanị na-enye ozi gbasara ebe kachasị mma n'ụwa ma na-enye ndị ahịa ha ọrụ njem. Uzo njem bu ihe di mfe nke ndi na-acho akwukwo. Ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ gọọmentị na-ahụ maka ihe ize ndụ bụ Kayak, TripAdvisor, Priceline, Trivago, Expedia, na Hipmunk. Ha ewuola ụlọ ọrụ azụmahịa atọ-dollar, a na-ewepụkwa ha ọdịnaya ma jiri ya na weebụsaịtị na blọọgụ dị nta.
Ọ bụ eziokwu na enweghi ike iwepu ọdịnaya nke e-commerce site na ngwa ngwa, ma ebe nrụọrụ weebụ dị ka eBay na Amazon ka na-efopụ maka ịnye ọnụahịa na nkọwapụta ihe.